Baarisyo lagu cabireyo heerka fayruska corona ee hawada ku jira - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Poppe, Cornelius/NTB scanpix
Baarisyo lagu cabireyo heerka fayruska corona ee hawada ku jira
La daabacay onsdag 25 mars 2020 kl 16.50
Cusbitalka cudurrada faafa ee magaalada Lund ayaa lagu hayaa baaris cabbiraad tirada inta fayrus corona ee hawada ku jirta, middaasina oo jawaab loogu raadineyo hadduu hawada ku noolaan karo iyo goobta hawad ee uu ugu badan yahay.
– Su’aallo badan ayaa ka taagan habka uu cfayruskani u faafo ama u faafi karo, gaar ahaan sida uu hawada la isugu arsiiyo qaadistiisa oo aan wax badan laga ogeyn, sida uu sheegay Jakob Löndahl, ahna docent ka howlgala jaamicadda Lund.
Fayruska corona ayaa lagu kala qaadaa inta badan kulanka labada qof ama dheecaan ku soo gaara, tusaale ahaan hindhiso ama qufac. Hase yeeshee waxaa yar aqoonta loo leeyahay heerka uu fayrusku hawada ugu noolaan karo.
Iyadoona iminka la sameeyneyo cabbiraad iyada oo weliba lala gaashaneyo shirkadda nadaafadda ee gobolka Skåne, Culimada ayaa horey cabbiraad ugu sameeyay fayruska qaboobaha ee matagga - vinterkräkviruset. Saddex aaladood oo kala duwan ayaa lagu cabiri doonaa hawada qolka bukaan socodka, koridoorka iyo goobaha guud ee cusbitalka cudurrada faafa ee Lund, goobtaasina oo lagu dar yeelo bukaan socodka fayruska qaba.
– Xaaladdan deg degga ah waxaannu rajeeyneynaa inaannu gacan ka geeysanno howlaha daryeelka caafimaad si ey go’aammo ku wanaagsan ee ka hortagga faafidda fayruska u gaaraa. Tusaale ahaan waxaan rajeyneynaa inaannu ogaanno goorta iyo goobta uu fayrusku ku baan yahay hawada iyo goorta ugu wanaagsan ee loo baahan yahay af-xirka, sida uu sheegay Jakob Löndahl.
Cilmi baareyaasha ayaa doonaya iney jawaab ka bixiyaan calaamadahee iyo xaaladahee daryeel ayay faafinta fayruska ugu badan tahay hawada. Waxaa shaybaarka lagu qiimeeyn doonaa saamiyada tijaabo ee hawada, waxaana natiijada ugu horreeysa la fileyaa dhowaanahan, sida laga soo xigtay Jakob Löndahl.
– Waxaan rajayn in toddobaadyo dabadood aannu helno warbixinno hor dhac ah. Waxayse noqon doonaa kuwo halka un ku saabsan. Markiise aannu xoogaa halka kaga shaqeeyno tijaabooyinka, laga yaabee innay ku faafto ugu yaraan Sweden, waan rajaynayaa, sida uu sheegay.